Ukusebenza kwale mihla
Igumbi lakho lokulala e i-loft sinombuki zindwendwe onguKaren
UKaren ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uKaren iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Le ndawo yodwa inesitayile sayo yonke. Ngeplani yomgangatho ovulekileyo unokuphumla kwaye ujabulele indawo yakho. Ilula, icocekile, inoxolo. Siyazamkela izinja ngokuvunywa kwangaphambili kunye nentlawulo eyongezelelweyo. Kukho ama-adventures amaninzi okufikelela kule ndawo. Zisa iibhayisekile zakho, thatha uhambo, okanye uhambe nezinja zakho kule ndawo intle yasekhaya.
Igumbi linebhedi enkulukazi kunye nefuton. Ikhitshi elincinci elibonelela ngeKeurig, imicrowave, itoaster, isinki, kunye nefriji encinci. Iipleyiti izitya izitya iikomityi neeglasi. Ishawa, akukho bhafu. Isilingi ibekwe eludongeni lwegayibhile, indawo yokuhamba evulekileyo epheleleyo enendawo eninzi. Ukupaka kwasimahla kwendlela yokupaka kwabelwana ngayo. Akukho nkonzo yeTV yentambo, kuphela i-WIFI-65” i-smart tv yokusasaza.
Indawo elungiselelwe ukusebenza: isitulo saseofisini, idesika
State park-5minutes, quaint village-5 imizuzu, Lancaster is 40 minutes away, VF yekhasino resort 30 mins, KOP mall 30 mins, intlambo forge park nayo 30 imizuzu kude. Kuninzi kakhulu ukufumana amava ekuhlaleni!
Uya kuyonwabela yonke indawo yakho yabucala, abanini nabo bayonwabela eyabo. Akukho sidingo sokusebenzisana kodwa silapha ukuba kukho into oyifunayo. Singakunika ukutya okuphekwe ekhaya, okuziswa kwindawo yakho ngokucwangcisa. Siza kwabelana ngezinto ezongezelelweyo onokuthi uzifune ukuba zixoxiwe kwangaphambili okanye nceda ubuze. Kunqabile ukuba kwiinyanga zasentlakohlaza/zasehlotyeni kubekho ingxolo yogcino lwaseyadini.
Uya kuyonwabela yonke indawo yakho yabucala, abanini nabo bayonwabela eyabo. Akukho sidingo sokusebenzisana kodwa silapha ukuba kukho into oyifunayo. Singakunika ukutya okuphekwe e…